Pyae Phyo (MMiTD): ♪ “သင့်ရဲ့Device များကိုတာရှည်သုံးစွဲနိုင်စေမည့်နည်းလမ်းများ” ♫
♪ “သင့်ရဲ့Device များကိုတာရှည်သုံးစွဲနိုင်စေမည့်နည်းလမ်းများ” ♫
သင့်ရဲ့နည်းပညာအဟောင်းတွေကိုအသစ်သဖွယ်အသုံးပြုနိုင်ဖို့နည်းလမ်း တွေများစွာရှိပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့သင့်ရဲ့ပီစီ၊ပရင်တာ၊တက်ဘလက်နဲ့အခြားသောပစ္စည်းကိရိယာများကိုအသစ်ပုံစံမျိုး အဖြစ်သုံးစွဲနိုင်စေရန် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် တို့ကနည်းပညာအသစ်တွေကိုနှစ်သက်သလိုရှိနှင့်ပြီးသား နည်းပညာအသစ် တွေကိုလည်းကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ အကြိုက်အနှစ်သက်ဆုံး သောနည်းပညာတွေကိုအမြဲတစေအသုံးပြုလေ့ရှိ ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာ သိမ်းဆည်းထားခဲ့သောဓာတ်ပုံများ၊ဗီဒီယိုဖိုင်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ဆော့ဝဲများသို့မဟုတ် ပြောင်းလဲထားသောကီးဘုတ် များပါဝင်တဲ့သင့်ရဲ့ လက်တော့တစ်လုံးကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ရတာဟာသင့် အတွက်အတော့တကယ့် ကို ခေါင်းခဲစရာတစ်ခုဖြစ်သလိုသင့်ရဲ့စိတ်ကိုဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်စေ မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါတွေအတွက် ငွေတွေတော်တော် များများ ပေးထားခဲ့ရမှာ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့၁၀နှစ်ခန့်က ၀ယ်ယူ ထားခဲ့တဲ့ ရေခဲသေတ္တာ တစ်လုံးက ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နေဦးမှာ ဖြစ်သလိုသင်ဝယ်ယူ ထားခဲ့ တဲ့ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်တဲ့ပီစီတစ်လုံးဟာလည်း အလားတူ ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ။သို့သော်လည်းနှစ်အနည်းငယ် အတွင်းမှာ နှေးနှေး ကွေးကွေးနဲ့ပျက်ယွင်းမှု များစွာကြုံတွေ့လာနိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်တယ် ဆိုတာကသင့်အနေနဲ့ကွန်ပျူတာအသစ်တစ်လုံး၊ဒါမှမဟုတ်စက်အစိတ် အပိုင်း အသစ်တစ်ခုလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ ပီစီကိုအသစ်ပုံစံအတိုင်းစွမ်းဆောင်ရည် ပြည့်ပြည့်နဲ့သုံးစွဲနိုင်စေဖို့ ပြန်လည် restore လုပ်နိုင်စေမယ့်အချို့သောအလွယ်ဆုံးနဲ့အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်း တွေရှိပြီး ငွေတစ်ပဲနိတောင် မကုန်နိုင်ပါဘူး။အလားတူနည်းလမ်းတွေကို သင့်ရဲ့တက်ဘလက်တွေအပြင်ပရင်တာတွေအတွက်ပါသုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါ တယ်။သင့်ရဲ့ပီစီတွေနဲ့ပရင်တာတွေကို ရေခဲသေတ္တာတွေလိုပဲသက်တမ်း ရှည်ကြာစွာသုံးစွဲနိုင်စေဖို့လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပေမယ့်ဒီနည်းလမ်း တွေနဲ့tools တွေက သူတို့ရဲ့သက်တမ်းကို နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းများစွာ တာရှည်စေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့သင့်မှာတစ်နှစ်ကျော်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ပီစီတစ်လုံးရှိတယ်ဆိုရင်အဲဒီ ပီစီအတွင်းပိုင်းကအလွန်အမင်းညစ်နွမ်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အခြားသော ပစ္စည်းကိရိယာတွေ(နောက်ဆုံးအနေနဲ့လူတွေရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာ) လိုပဲပီစီတွေ ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်ဖုန်တွေများစွာတင်နေလို့ပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်နေမှာပါ။အဆိုပါအတွင်းပိုင်း အမှိုက်တွေဖုံးနေမှုတွေကိုသင့်အနေနဲ့သိပ်စဉ်းစားမိမှာ မဟုတ်သလိုဒီလိုမျိုးဖုန်တွေတင်နေတာကစက်အတွင်းကဒီဂျစ်တယ်အမှိုက် များလိုသင့်ရဲ့ပီစီကိုနှေးကွေးစေမယ်ဆိုတာသိပ်တွေ့ရမှာမဟုတ်ပေမယ့် အဲဒါတွေကသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့အခြားသောနည်းပညာများရဲ့သက်တမ်း အတွက်အဓိကကျတဲ့အချက် တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်မှုန့်များနဲ့ ချောဆီများဟာသင့်ပီစီရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကိုဖုံးအုပ်ထားသလိုဖြစ်ပြီး ယင်းအစိတ်အပိုင်းများတစ်ဝိုက် လေလှည့်ပတ်စီးဆင်းမှုကို ရပ်တန့်နိုင် စေတဲ့အတွက်ယင်းတို့ကိုအပူချိန်မြင့်တက်လာစေပါတယ်။သုတေသီများ တွေ့ရှိချက်များ အရအဆိုပါအပူများကကွန်ပျူတာများကိုလုပ်ဆောင်မှုပိုများတဲ့processor များထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာပျက်စီးစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အိုင်တီပညာရှင်များရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေမလိုအပ်ဘဲစိတ်ရှည် သည်းခံမှု၊လက်ငြိမ်မှုနဲ့ဖုန်များအတွက်မျက်နှာဖုံး တွေလောက်ပဲလိုအပ်မှာပါ။သင့်ရဲ့ပီစီကိုပိတ်ထားပြီး ပါဝါကေဘယ်ကြိုးများကိုဖြုတ်ထားပါ။
ဘေးဖက်အဖုံးကိုဖယ်ရှားပါ။ပန်ကာများကိုဖြုတ်ပြီးယင်းတို့ကိုဖုန်သုတ် အ၀တ်နဲ့သုတ်ပါ။အချို့သောပီစီတွေကပန်ကာတွေထက် ဖြုတ်လို့ရသော လေစစ်များပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးအဲဒါတွေ ကသန့်စင်ရပိုမိုလွယ်ကူပါတယ်။
အခြားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုမထိပါနဲ့။ လေမှုတ်စက်နဲ့Circuit boards များ၊စက်အတွင်းပိုင်းများကိုဖုန်များထွက်သွားစေရန်မှုတ်ထုတ်ပါ။အမေဇုန်မှ လေမှုတ်စက်များကို £10 အောက်နဲ့(www. sipca.com/12144) မှာ ၀ယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စီပီယူနှင့်ဂရပ်ဖစ်ကတ်များကို လေမှုတ်ရာတွင် ညင်သာစွာကိုင်တွယ်ပါ။ လေမှုတ်စက်မှ လေများကိုသိပ်နီးနီးကပ်ကပ်နှင့် အကြာကြီး မမှုတ်ပါနှင့်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လေပြင်းအားက အစိတ် အပိုင်းများကိုပျက်စီးစေသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ လေမှုတ်စက်မှ လေများနဲ့USB ports များနဲ့အခြားသောsockets များမှဖုန်များကိုလည်း မှုတ်ထုတ်ပါ။Power Supply အတွင်းမှဖုန်များကိုမှုတ်ထုတ်ရာမှာ သတိပြု ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် အောက်ခြေမှာရှိတဲ့အံခွက်ထဲမှ ဖုန်များကိုညင်သာစွာစုပ်ထုတ်ပါ။
သင်က ဆေးလိပ်သောက်သူမဟုတ်သလိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေမရှိဘူးဆိုရင် သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်လောက်သန့်ရှင်းသင့်ပါတယ်။တကယ်လို့သင်က ဆေးလိပ်သောက်ပြီး အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုရင် တော့ တစ်နှစ်မှာသုံးလေးကြိမ်သန့်စင်ပေးသင့်ပါတယ်။သန့်ရှင်းရေး လုပ်နေစဉ် လေမှုတ်စက်ကိုလက်ထဲမှာကိုင်တွယ်ထားပြီးကွန်ပျူတာရဲ့ လေထွက်ပေါက်များတစ်လျှောက်ဖုန် များကိုမှုတ်ထုတ်ပစ်ကာအမှိုက်များကိုသန့်ရှင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
<သင့်ရဲ့ပီစီမှ နှေးကွေးလေးလံ ဆော့ဝဲများကိုပိတ်ထားခြင်း>
တကယ်လို့သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာက နှေးကွေးသထက် နှေးကွေးလာရင် Hard Drive အသစ်တစ်လုံးဝယ်ဖို့သို့မဟုတ်processor ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ဖို့လိုအပ် တယ်လို့မယူဆပါနဲ့။သင့်အနေဖြင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအချို့သောrun နေတဲ့ ဆော့ဝဲတွေကိုရပ်တန့်စေဖို့ရိုး ရှင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်ပါကကွန်ပျူတာစတင်ချိန်သို့မဟုတ်background မှာအလို အလျောက်run နေမယ့်process များကိုWindows ကတားမြစ် ထားနိုင်ဖို့ တို့ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။Task Manager မှာသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ မှာrun နေတဲ့အခြေခံအကျဆုံးသောသတင်းအချက်အလက်တွေအတွက် ထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်ဆောင်ပေး ထားပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုပိုမိုသိရှိလိုရင် တော့Microsoft ရဲ့အခမဲ့ရရှိသည့်tools တစ်ခုဖြစ်တဲ့Autoruns(www. snipca.com/12127) နဲ့အသစ်အဖြစ်အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်တဲ့Process Explorer(www.snipca.com/12128) တို့ကိုdownload လုပ်ပါ။Autoruns မှာသင်ကWindows ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါဘယ်ပရိုဂရမ်တွေနဲ့process တွေက အလိုအလျောက်run နေတာလဲသိရှိဖို့Everything tab ကို ရွေးပါ။သင် နားမလည် တာတွေရှိတယ်ဆိုရင်Right-click နှိပ်ပြီးယင်းကိုပိုမို သိရှိနိုင်စေ ရန်Search Online ကိုနှိပ်ပါ။အကယ်၍မလိုအပ်ရင်ယင်းကိုdisable လုပ်ထား ပါ။Process Explorer ကသင့်ရဲ့လက်ရှိrun နေသောprocesses များနဲ့ သူတို့ကRAM ဘယ်လောက်သုံးတယ်ဆိုတာသိရှိနိုင်စေဖို့ ပြသနေမှာဖြစ်ပါ တယ်။Autoruns လိုပဲသင်မလိုအပ်သောprocess များကိုစူးစမ်းရှာဖွေနိုင် စေဖို့နဲ့disable လုပ်ထားနိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့process တစ်ခု ကဘာလုပ်တယ်ဆိုတာကိုနားမလည်ရင်ယင်းကိုချန်ထားခဲ့ပါ။တကယ်လို့ သင့်ရဲ့ပီစီကပျက်ယွင်းစပြုနေတယ်သို့မဟုတ်မျက်နှာ ပြင်ပြာသို့ပြောင်းလဲ သွားပါက(www.snipca.com/12129)အဲဒါကိုဒီအတိုင်းမထားဘဲ အကောင်းဆုံး အတွက်ဘာတွေကဖြစ်နေသလဲဆိုတာရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
WhoCrashed(www.snipca.com/12126) ကfree ရတဲ့tool တစ်ခုဖြစ်ပြီး သင့်စက်မှာဖြစ်နေတဲ့crashes များကိုစစ်ပေးမှာ ဖြစ်ကာဘာတွေဖြစ်နေ သလဲ ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာစာရင်းကိုထုတ်ပေးမှာ ဖြစ်သလိုရှင်းလင်းသော အင်္ဂလိပ်စာအရေးအသားနဲ့အစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးယင်းမှာWindows ရဲ့ကိုယ်ပိုင်crash logs မှတ်သားထားမှုများကို ပေးအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ပရိုဂရမ်တွေနဲ့processes တွေကcrashes တွေဖြစ်နေစေ သလဲဆိုတာကိုမဖြစ်မီမှာရှာဖွေနိုင်စေဖို့ပရိုဂရမ်အသေးဖြစ်တဲ့Process Piglet(www.snipca.com/12131) ကိုinstall လုပ်ပြီးသုံးစွဲနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အပူတွေကသင့်ကွန်ပျူတာhard drive ကိုပျက်ဆီးစေနိုင်ပါတယ်။Intel အတွက်နည်းပညာသစ်များစွာကိုဖန်တီးပေးတဲ့သုတေသနပညာရှင်များရဲ့ တွေ့ရှိချက်အနေနဲ့hard-drive အပူချိန်ကို၅ဒီဂရီCelsius တိုးလာခြင်းဟာ processor များရဲ့လုပ်ဆောင်ရည်ကို၁၀ရာခိုင်နှုန်းမှ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်းသို့ ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းကဲ့သို့တူညီသော သက်ရောက်မှုကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။Hard Drive မှာအပူချိန်၁ဒီဂရီကျဆင်းသွားတိုင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု အနေ နဲ့hard-drive ရဲ့သက်တမ်း(www. snipca.com/12118) ကို၁၀ရာခိုင်နှုန်း တိုးမြှင့်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။သင့်ပီစီရဲ့ပင်မအပူချိန်နဲ့အခြားသော အစိတ် အပိုင်းများ ကိုစစ်ဆေးဖို့အခမဲ့ရသောsystem-information tool ဖြစ်တဲ့ HWMonitor (www.snipca.com/12121) နဲ့စစ်ဆေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အပူချိန်များကိုလျှော့ချနိုင်စေရန်နှင့်hard drive ကိုကြံ့ခိုင်နိုင်စေရန်၊ သင့်ပီစီ မှာရှိတဲ့ဖုန်များကိုရှင်းထုတ်နိုင်စေရန်၊ လေ၀င်လေထွက်ကောင်းအောင် လုပ်ပြီး နေရောင်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သောနေရာမှာမရှိအောင်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နွေရာသီမှာဆိုရင်တော့လိုအပ်လျှင်စားပွဲတင်ပန်ကာကိုသုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါ တယ်။တကယ်လို့ နွေရာသီမှာအလွန်ပူနေတယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့ လက်ပ်တော့ အပူချိန်ကိုလျှော့ချဖို့ ငွေအနည်းငယ်သုံးစွဲရမှာဖြစ်ပြီးUSB နဲ့အားသွင်းတဲ့ အောက်ခြေမှာပန်ကာပါဝင်သောlaptop stand တစ်ခုကိုဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။ယင်းကိုAmazon (www.snipca. com/12123) မှာ£10 ၀န်းကျင်နဲ့ ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။Process Piglet ကbackground မှာmemory သိပ်မစား ဘဲrun နေမှာဖြစ်ပြီးmemory သုံးစွဲမှုမှာတက်လိုက်ကျလိုက်ပုံစံမျိုး တွေ့နေ မှာဖြစ်ပါတယ်။ယင်းကိုပိတ်ထားလို့ရပြီးသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာသုံးစွဲနေမှုကိုပိုမို ချောမွေ့စေရန်restart လုပ်တာ၊uninstall လုပ်တာ၊disable လုပ်တာတွေ ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
<System Restore လုပ်ပြီးသင့်ရဲ့ပီစီကိုအသစ်အခြေအနေအတိုင်း ပြုလုပ်ခြင်း>
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့junk ဖိုင်တွေ၊folders တွေနဲ့ ဆော့ဝဲတွေကို အခမဲ့ ရတဲ့CCleaner (www.piriform.com/ccleaner) လိုမျိုး ဆော့ဝဲတွေ သုံးပြီး ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။အလားတူစွာပဲအကောင်းဆုံးသောအခမဲ့ပရိုဂရမ်ဖြစ်တဲ့Wise Care 365(www.wisecleaner. com) ကိုသုံးပြီးလည်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ တယ်။ဒီလိုမျိုးsystem-cleaning tools တွေကသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာစွမ်းဆောင် ရည် ကိုတိုးမြှင့်ဖို့နဲ့သက်တမ်းရှည်ကြာစွာသုံးစွဲနိုင်ဖို့များစွာအထောက် အကူပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။သို့သော်လည်းသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို တကယ့် အသစ် အတိုင်းသုံးစွဲနိုင်စေဖို့ကSystem Restore လုပ်ဖို့ပါပဲ။အဲဒါက ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယင်းကသင့်ကွန်ပျူတာhard drive တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ ဆော့ဝဲတွေ၊ settings တွေနဲ့ဖိုင်တွေအားလုံးကိုဖတ်ရှုမှာလုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့သင့်ရဲ့Operating System တစ်ခုလုံးကို back up လုပ်ထားဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ယင်းကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ရာမှာ Windows အနေနဲ့သင့်ရဲ့data များကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်restore point များချမှတ်ထားမှုများလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။Backed up လုပ်ထားသော data များကိုDVD မှာသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီးသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာတစ်ခုလုံးကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပစ်ပြီးတဲ့နောက်ယင်းDVD မှအချို့သို့မဟုတ်အားလုံးကို restore ပြန်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။DVD နဲ့သိမ်းဆည်းထားခြင်းကအကယ်၍ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမတော်တဆပျက်ယွင်းသွားတဲ့အခါအသုံးတည့်တဲ့အာမခံမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။Paragon Backup & Recovery Free(www.snipca.com/12125) ဟာသင်backup လုပ်ဖို့နဲ့restore လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ပြသပေးပြီးလုပ်ဆောင်နိုင် စေမယ့်အခမဲ့ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပါ တယ်။ယင်းကသင့်ရဲ့အဖိုးတန်data တွေ ပျောက်ဆုံးမှုမရှိစေရန်သေချာစေမှာဖြစ်ပြီးသင့်ရဲ့ ဆော့ဝဲတွေ၊ settings တွေကိုနဂိုမူလအတိုင်းရှင်းလင်းပြီးသားကွန်ပျူတာအသစ်မှာ ပြန်လည် ထားရှိ နိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။သင့်ရဲ့data တွေအားလုံးကို backed up လုပ်ပြီးတဲ့အခါကွန်ပျူတာboot တက်တဲ့အခါF8 အကြိမ်ကြိမ်နှိပ်ပြီး ၀င်ပါ။ ပွင့်လာတဲ့menu မှာ‘Repair your Computer’ကိုနှိပ်ပါ။ထို့နောက်HDD Recovery (ယင်းကိုသွားရန်အတွက်scroll down ဆွဲချပါ) ကိုနှိပ်ပါ။ သင့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာကိုပိုမိုချောမွေ့စွာတာရှည်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်အတွက်သုံးလေးနှစ်ကြာတဲ့အခါတိုင်း Restore ပြန်ပြန်လုပ်ပါ။
သင့်ရဲ့လက်တော့ဘက်ထရီသက်တမ်းဘယ်လောက်တာရှည်ခံနိုင်မလဲ ဆိုတာကသင့်အနေနဲ့ဘယ်လိုကိုင်တွယ်သုံးစွဲမလဲဆိုတာပေါ်မူတည်ပါတယ်။သင့်အနေနဲ့အားကုန်တဲ့ အထိများစွာမသုံးစွဲသင့်ပါဘူး။သို့သော်လည်းအချိန်အကြာကြီးလည်းအားသွင်းမထားသင့်ပါဘူး။ အဓိက သော့ချက်ကတော့ မှန်ကန်တဲ့ ဟန်ချက်ညီညီနဲ့နည်းလမ်းကိုရှာဖွေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဘက်ထရီအားကိုလုံးဝကုန်သွားသည်အထိဘယ်တော့မှ မသုံးစွဲပါနဲ့။ယင်းကဲ့သို့သုံးစွဲတဲ့အခါပါဝါအားကုန်ခါနီး၁၀ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ပဲရှိတဲ့အခါမှာplug ထိုးဖို့အသိပေးချက်pop-up ပေါ်လာတာကသင့်ကိုစိတ်ဆိုး စေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကကွန်ပျူတာ မော်ဒယ် နဲ့operationg system (OS) နဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်။သို့သော်ဒီmessage တွေပေါ်လာတာကအလွန် ကောင်းမွန်တဲ့အချက်လည်း ဖြစ်ပါ တယ်။ဘက်ထရီအားကုန်သွားတဲ့ အခါ ဆက်လက်သုံးစွဲနေခြင်းကလုပ်ကိုင်ရတာခက်ခဲပြီးသက်တမ်းကိုလည်း တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာစေပါတယ်။ဒါကြောင့်တက်လာတဲ့pop-up ကိုလိုက်နာတာသို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ဘက်ထရီကုန်ဆုံးခါနီးပြောတဲ့message ပေါ်လာစေတဲ့အထိမဖြစ်ပေါ် ပါစေနဲ့။ဘက်ထရီအား၂၀ရာခိုင်နှုန်းအထိပဲ ကျန်တဲ့အခါမှာplug ထိုးခြင်းက ကောင်းမွန်တဲ့အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်ပါ တယ်။
သို့ရာတွင်plug ကိုအချိန်တိုင်းထိုးထားဖို့တော့မလိုအပ်ပါဘူး။လက်တော့တွေ က ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသယ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Plug ထိုးထားခြင်းကအပူချိန်လွန်ကဲစေပါတယ်။အပူတွေကကွန်ပျူတာ အစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ရန်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာပိတ်ထားတဲ့အခါ Plug ကိုထိုးမထားပါနဲ့။ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်များမကျဆင်းစေဖို့ စံသတ်မှတ်ချက် များအတိုင်းချိန်ညှိထားခြင်းက ကောင်းမွန်တဲ့အချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ယင်းကိုCalibration လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။Calibration လုပ်တဲ့အခါဘက်ထရီရဲ့built-in မီတာများကိုreset လုပ်သွားပြီးWindows မှာပိုမိုတိကျတဲ့ပါဝါအဆင့်တွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။မှားယွင်းတဲ့အချက် အလက်များဖတ်ရှုရမှုဟာဘက်ထရီကပြသနေတဲ့အချက်အလက်များလွဲမှား ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ သင့်ရဲ့Desktop battery icon က၄၀ရာခိုင်နှုန်း ကျန်သေးတယ်လို့ပြောနေတဲ့အခါသင့်ရဲ့လက်တော့ကအသိပေးချက်မရှိဘဲအလိုအလျောက်shut down ချသွားတယ်ဆိုရင်ဘက်ထရီမီတာများကို ချိန်ညှိဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။Calibration လုပ်တာကအပိုဆော့ဝဲများ မလိုအပ်ဘဲရိုးရှင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို sleep ဖြစ်စေမယ့်Screen Saver နဲ့အခြားသောpower management settings များကိုပိတ်ထားပြီးစတင်နိုင်ပါတယ်။
၁၀၀ရာခိုင်နှုန်းအထိအားဖြည့်ထားပြီးတဖြည်းဖြည်းအားကုန်လာစေကာ shut down ကျသွားစေပါ။ထို့နောက်၁၀၀ရာခိုင်နှုန်းပြည့်သည်အထိ အားပြန်ဖြည့်ပါ။ ထို့ပြင်တကယ်လို့သင့်ရဲ့လက်တော့မှာတစ်ပါတည်းပါဝင် လာတဲ့calibration လုပ်ဖို့ဆော့ဝဲများကိုသင့်ရဲ့ပရိုဂရမ်များမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါ တယ်။သင့်ရဲ့ဘက်ထရီရဲ့တကယ့်အားသွင်းထားမှုအဆင့်များ၊ အခြေအနေ များနဲ့အခြားသောအချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးဖို့free tool တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Battery Care(http://batterycare.net) ကကောင်းမွန်ပါတယ်။ယင်းက သင့်ဘက်ထရီစံသတ်မှတ်ချက်များနဲ့ပြန်လည်ချိန်ညှိဖို့လိုအပ်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်နှကြိမ်အပြည့်အ၀အား ကုန်သည်အထိထားရှိရမယ်ဆိုတာသိရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ယခုဖော်ပြခဲ့သောနည်းလမ်းများကသိပ် အပန်းမကြီးဘဲ သင် ကိုယ်တိုင်လွယ်လင့်တကူလုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးသင့်ရဲ့အဖိုးတန်Device များကိုတာရှည်သုံးစွဲနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။